1 TB nke nchekwa maka ama gị na 2020 ekele Micron | Akụkọ akụrụngwa
1 TB nke nchekwa maka ama gị na 2020 maka Micron
Ọtụtụ bụ mgbanwe nke ụlọ ọrụ metụtara ụwa nke nkwukọrịta na-eweta, n'ụzọ dị ịtụnanya ọnụ ọgụgụ ka ukwuu, n'agbanyeghị na ha na-atọ ụtọ ma na-agbanwe agbanwe, anaghị ahapụ ụlọ nyocha. Ihe omuma atu doro anya nke ihe m kwuru bu, dika ima atu, na nkwa nke mụbaa ikike nchekwa nke ngwaọrụ anyị ma ọ bụ batrị ndị ahụ nwere ike ịchaji na nkeji iri na ise ma nyefee otu izu.
Eziokwu bụ na, opekata mpe n'ihe gbasara nchekwa, ọ dị ka ọ bụghị ihe niile ga-efu kemgbe micron, ụlọ ọrụ ọkachamara na nhazi na imepụta Flash na-echeta, ka kwuputara na ha na-ezube ịcheta ihe ruru 1 TB maka klas nke ngwaọrụ site na 2020.
Micron enweela ebe nchekwa 32GB na ahịa nke jiri teknụzụ 3D NAND.
Iji mee ka nke a bụrụ eziokwu, ndị injinia ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na imepụta teknụzụ ahụ 3D NAND, nke na-enye ohere ka akụkụ SSD mbụ karịa 10 TB rute ahịa. Dị ka ị pụrụ ịhụ, banyere ihe e kwuworo n'elu, anyị na-ekwu okwu banyere a teknụzụ dị adị taa ka etinye ya n'ọrụ. Otu n'ime nsogbu ya bụ isi, ya mere okwu nke afọ 2020, bụ ọnụahịa ugbu a maka ya ebe ọ bụ na ebe nchekwa ndị a, taa, gafere $ 10.000.
N'ihi ntinye nke ụdị ibe a na ama anyị, ọ bụghị naanị na anyị ga-enweta ikike nchekwa, kamakwa ọ ga budata dịkwuo agụ na ide bandwit, mmalite ngwa ngwa na ibido oge ... N'oge a bụ eziokwu bụ na ikike a dịtụ ntakịrị, ọbụlagodi, gwa gị na Micron enweela n'ahịa taa 32GB ebe nchekwa ibe na-eji nke a technology, ya mere, anyị bụ ndị otu nzọụkwụ nso ka ọbọ elu ikike.
Ozi ndi ozo: micron
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Hardware » 1 TB nke nchekwa maka ama gị na 2020 maka Micron
Microsoft na-arụ ọrụ na ụdị atọ dị iche iche nke Surface AIO